Modern Physics and Eastern Mysticism: 01 May 2011
२०६८ सालको ग्रहफल
ज्योतिषशास्त्रमा दर्ुइ प्रकारको ग्रह गणना पद्धति वर्तमानमा प्रचलनमा आएको छ । एउटा सायन र अर्को निरायण, जसले आफ्नो गणनामा वसन्त सम्पातलाई आरम्भ स्थान मान्दछन्, तिनीहरू सायन वादी र त्यसको अतिरिक्त कुनै अरु नै विन्दुलाई आरम्भबिन्दु मान्ने निरायण वादी । सामान्यतय भारत, नेपालमा जुन ज्योतिषको प्रचलन छ । पात्रो (पाञ्चाङ्ग) बन्दछ । त्यो निरायण हो र पाश्चात्य ज्योतिषहरूले जुन गणनालाई आधार लिन्छन्, त्यो सायन हो । आजकाल निरायणवादी र सायनवादीबीचको खाडल गहिरिँदै गएको र विवाद झन् चुलिँदै गइरहेको देखिन्छ ।
ज्योतिर्विज्ञानमा जब सूर्य ग्रह एक राशिबाट अर्को राशिमा प्रवेश गर्दछ, त्यसलाई संक्रान्ति या संक्रमणकाल भनिन्छ । सामान्यतया लोकव्यवहारमा यसलाई संक्रान्ति भन्ने प्रचलन छ । सूर्यको राशि परिवर्तन अर्थात् संक्रान्तिकाल या संक्रान्तिको दिन ज्योतिर्विज्ञानमा विशेष महत्व राख्दछ । वैशाख संक्रान्ति, श्रावण संक्रान्ति, माघ संक्रान्ति विशेष महत्वका छन् । ज्योतिषविज्ञानमा मेष (वैशाख) संक्रान्तिमा सूर्य भेष राशिमा प्रवेश गर्दछ र आजकै दिनदेखि नयाँ वर्षसुरु हुन जान्छ र नेपालमा नयाँ वर्षो उपलक्ष्यमा र्सार्वजनिक विदा पनि दिइन्छ । यसै संक्रान्तिको दिनलाई आधार मानेर वर्षरिको भविष्यवाणी गर्ने प्रचलन ज्योतिषहरूमा विद्यमान छ ।
गणना पद्धति नै दर्ुइवटा भएको हुनाले संक्रान्ति पनि दर्ुइवटा आउने भए । त्यसकारण संक्रान्तिकाल -पुण्यकाल) पनि दर्ुइवटा हुने भए, लग्न कुण्डली पनि दर्ुइवटा नै हुने भए, अब भविष्यवाणी गर्दा पनि फल फरक-फरक आउने भयो । तर, पनि मूलभूत कुरा एउटै हुन जान्छ । निरायणवादीहरूले अदृश्य फललाई आफ्नो पलादेशको मुख्य आधार मान्छन् भने सायनवादीहरू दृश्य फललाई आफ्नो पालादेशको आधार मान्छन् । विशेष गरेर जसरी भगवान् एउटै हुन् सक्छ तर धर्मसम्प्रदाय मान्यताअनुसार जाने बाटोको बारेको व्याख्या फरक भएझैँ ज्योतिषमा पनि विभिन्न मान्यता, सिद्धान्त र व्याख्या पाइन्छ । ऋषि वशिष्ठले निरायण मान्यतालाई बाख्राको गलस्तनझैँ निर्रथक बताउनुभएको भए तापनि आमहिन्दुहरूमा निरायण गणनाको पञ्चाङ्ग र ज्योतिष मान्यता चलन चल्तिमा छ । २१ मार्च २०११, सोमबार बिहान ५ बजेर ५ बजे मिनेटमा सूर्यको मेष राशिमा प्रवेश भएको छ । उक्त समयमा काठमाडौँको पर्ूर्वीय क्षितिजमा मीन लग्नको सिंह नवांश उदाइरहेको थियो । लग्नमा मित्रग्रही मङ्गल भए तापनि अष्टम स्थानमा रहेको शनि चन्द्रमाको विषयोग विश्वको लागि महाप्रलयकारी बन्नेछ । यसले भूकम्प, सुनामी आदिको कारण जनधनको ठूलो क्षति हुन जानेछ । राज्य घरमा राहू नीचो हुनाले सरकारले ठूलो संकटको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । असार, कात्तिक, पुस महिना विश्वको साथसाथै नेपालको लागि विशेष घातक रहनेछ । वर्षो राजा शुक्र र मन्त्री चन्द्रमा बन्न गएका छन् । जसको फलसवरुप राज्य सत्तामा कर्मस्थानमा शनि उच्च भै बसेका हुनाले नेपालमा नयाँ संविधान बन्ने छ । देश उच्च महत्वाकांक्षीको साथ उन्नतितिर लम्कनेछ । विश्वमा म्लेच्छ जातिको प्रभाव बढ्न जानेछ । राष्ट्रपतीय प्रणालीको प्रभाव बढ्न जाने देखिन्छ । धनस्थानमा बृहस्पतिको शुभप्रभाव हुनाले बैंक, वित्तीय संस्था एवं शेयर बजारमा उल्लेखनीय सुधारको लक्षण आउनेछ । वैदिक धर्मकर्मको धार्मिक कृत्यका लागि कालको संकल्प गर्दा चन्द्रमासको उल्लेख गर्ने परम्परा छ र चन्द्रमासअनुसार विक्रम संवत्को सुरुवात चैत शुल्क प्रतिपदाको दिनदेखि हुन्छ र २०६८ सालको सुरुवात चैतशुक्ल प्रतिपदा ५ मार्च २०११ शुक्रबारको दिनदेखि भएको छ । त्यससमयको लग्नकुण्डली विचार गर्दा शुक्र र शनिको परस्पर सम्बन्ध केन्द्रस्थानमा रहनु भौतिक क्षेत्रमा नयाँ आविस्कार हुने भए तापनि राहु द्वादश स्थानमा हुनाले मानव जातिको लागि विनाशकारी रहने छ ।
Posted by Dr. Suneel Sitaula at 6:03 PM
Labels: २०६८ सालको ग्रहफल, ज्योतिर्विज्ञान
वर्ष६ अंक-१, २०६८ वैशाख
ज्योतिर्वैज्ञानिकहरु जन्म समयलाई बढी महत्व दिन्छन् । जन्म समय सही छ भने भविष्यवाणी सही हुन्छ अन्यथा नहुन पनि सक्छ भनी यत्रतत्र र्सवत्र भनि हिँड्दछन् । भविष्यवाणी मिल्नु कसैकसैले इष्ट सिद्धि हो पनि भन्ने गर्दछन भने कसै कसैले यो विशुद्ध गणितीय हिसाव हो । यसमा कुनै दैविक आर्शिवाद या चमत्कारको जस्त पर्दैन भन्ने गर्दछन् ।
तर ज्योतिर्विज्ञानमा भएको दर्ुइ प्रकारको गणना पद्धतिले वर्तमान समयमा ठूलै समस्या खडा हुन गएको छ । पाश्चात्य ज्योतिषीहरुले प्रयोग गर्ने सायन पद्धति र भारत, नेपालमा प्रयोग गरिने निरायण पद्धति । यी दुबैको अन्तर २४ दिन पुगिसकेको छ । आकाशमा ग्रह सायन अवस्थामा रहन्छ । यो चलायमान पद्धति हो । अयनलाई स्थिर मानेर चिना बनाउने, राशि बताउने र भविष्यवाणी गर्ने गरिन्छ । तर त्यो अयनांशको मान पनि सिद्धान्तकार पिच्छे फरक-फरक हुनाले गणनामा भिन्नता आउन जान्छ । नेपालको आफ्नो सरकारर्ीतर्फबाट कुनै विशेष अयनांशलाई प्रयोगमा ल्याइएको नभए तापनि भारत सरकारको पंचाङ्ग सुधार समितिले तयार पारेको लाहिडी अयनांश प्रायः पर्ूर्वीय ज्योतिषीहरुले प्रयोगमा लाएका छन् । त्यस्तैगरी पाश्चात्य ज्योतिषीहरुले वैदिक ज्योतिषको प्रयोगमा फागन अपनांशलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
वि.सं. २०६८ साल वैशाख १ गते ६ बजेको अयनांश
नेपाली पात्रो ः २४० १९' ३७'
केतकी ः २४०००'४४'
एन सि लाहडी -चित्रापक्ष) ः २४०००'५२.७१'
जगन्नाथ -विष्णु नाडी) ः २४०००'४८.४६'
रमण ः २२०३४'०७'
देवदत्त ः २३०३८' १५-७१'
कृष्णमर्ुर्ति ः २३०५५'०५.२'
उशा-शशि ः २०० १२' ५४.४८'
युक्तेश्वर ः २२० ३८' ११.०२'
जे.एन. भसिन ः २२० ५५' ११.२'
चन्द्र हरि ः २४० ४४' ५२.७१'
फागन ः २४० ५३' ५२.८१'
द्विजहल कुल ः २८० ३१' ०२-१७'
ग्यालेक्सि केन्द्र ः २७० ००' ३८.२१'
हिप्पाकोरस ः २०० २४' १९'
डुलुस ः २७० ५८' ०२'
अल्डेवारन ः २४० ५५' ००.९०'
प्रस्तुत प्रयोगमा आएका अयनांशहरुमा २० देखि ५० सम्मको फरक देखिन्छ । रमण अयनांश २२० मा छ भने लाहिडी २४० मा त्यस्तै द्विजहलकुलको २८० र डेलुस, ग्यालेक्सी केन्द्रको २७० । यसरी अयनांशको फरकले गर्दा फल बताउँदा फरक आउनु स्वाभाविक हो । अब २०६८ वैशाख १ गते बिहान ६ बजे काठमाडौँमा कुनै व्यक्तिको जन्म भयो, उसको लाहिडी अयनांश प्रयोग गर्दा केतुको दशा २०७३ साल चैत्र ५ गतेसम्म चल्छ भने रमण अयनांश प्रयोग गर्दा केतु दशा २०७३ साल जेठ २१ गते सकिन्छ । यहाँ दशा वर्षा नै लगभग ९ महिनाको अन्तर आयो । एउटा ज्योतिषीले गणना गरेको चल्ती दशान्तर दशा र अर्कोले गणना गरेको दशा-अन्तरदशामा फरक पर्न जादा स्वभाविक रुपमा नै ज्योतिषीप्रति र्सवसाधारणको भरोषा उड्न जानेछ । यसकारण अब हेराउन आउनेलाई के तपाईंको जन्म समय सही छ - भनेर सोध्नुभन्दा ज्योतिषीहरुले प्रयोगमा ल्याएको अयनांश सही छ त - विचार गर्नु जरुरी छ । विद्वतवर्गबाट सहयोगको अपेक्षामा ज्योर्तिविज्ञान रहिरहने छ । अन्त्यमा नववर्ष२०६८ को सम्पर्ूण्ा शुभ चिन्तक पाठक एवं सहयोगीहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।
Posted by Dr. Suneel Sitaula at 4:01 PM
Labels: अयनांश, ज्योतिर्वैज्ञानिक, पंचाङ्ग